E-News Nepali || Fast and Accuracy » धन-धान्यले भरिपूर्ण हुन र गरिवीबाट मुक्ती पाउन हरेकदिन बिहान यसो गर्नुहोस्
धन-धान्यले भरिपूर्ण हुन र गरिवीबाट मुक्ती पाउन हरेकदिन बिहान यसो गर्नुहोस्
दरिद्रता हुन बाट बच्नको लागि के गर्ने ? घरमा सुख-समृद्धि ल्याउन विहानै गरौं यी काम – जानीराखौतपाई शास्त्रमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ? शास्त्रका अनुसार जीवनमा आत्मअनुशासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै केही नियमको उल्लेख गरिएको छ शास्त्रमा उल्लेख भएका कुराहरुको जसको पालना गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। ब्रह्मवैवर्त पुराणमा यस्ता कुराको उल्लेख गरिएको छ जुन गर्नु हुँदैन। यस्ता काम गर्दा करोडपति पनि कङ्गाल हुने शास्त्रमा उल्लेख छ।
यी तिथिमा भुलेर पनि नगर्नु मालिस र यौन कार्य हिन्दु पाञ्चाङ्ग अनुसार कुनै पनि महिनाको औंशी, पूर्णिमा, चतुर्दशी र अष्टमी तिथिमा तेल मालिश र मांसाहार गर्नु हुँदैन । यी तिथिमा यौन कार्य गर्नु पनि अशुभ मानिन्छ। अझ परपुरुष वा परस्त्रीसँग त भुलेर पनि संगत गर्नु हुँदैन । जमिनमा राख्नै नहुने कुरा शास्त्रमा बत्ति, शिवलिङ्ग, शालिग्राम, मणि, देवी-देवताका मुर्ति, जनै, सुन र शंख कहिले पनि भुइँमा राख्न नहुने उल्लेख छ । यिनलाई भुइँमा राख्नै परेपनि कपडा बिच्छ्यार राख्नु पर्छ ।
पुजाको समयमा वा विहान साँझ यौन सम्बन्ध वर्जित शास्त्रमा दिउसोमा पनि पुजाको समयमा वा विहान साँझ यौन सम्बन्ध वर्जित छ । यी समयमा यौन क्रिडामा लिप्त हुँदा अनेक प्रकारका रोग लाग्ने र अशुभ हुने उल्लेख छ। सूर्य र चन्द्रमा अस्ताउँदा हेर्नु हुँदैन सूर्य र चन्द्रमा अस्ताको समयमा हेर्न त्यस दिशामा हेर्न नहुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यस्तो समय अशुभ मानिन्छ । यस्तो दृष्य हेर्दा आँखामा समेत समस्या आउन सक्छ।
यिनीहरुलाई कहिल्यै तल नपार्नुस् आफ्ना बाबु, आमा, पुत्र, पुत्री, पत्नि, पति, गुरु, अनाथ स्त्री, बहिनी, भाई, देवी-देवता र ज्ञानी ब्यक्तिलाई अनादर गर्नु अशुभ मानिन्छ । यी ब्यक्तिको अनादर गर्दा अशुभ हुने र धननाश एवं दरिद्र्ता बढ्ने उल्लेख छ। घरमा प्रवेश गर्दा सँधै ख्याल गर्नुस् जव बाहिरबाट घर आइन्छ त्यतिबेला सिधै भित्र प्रवेश गर्नु अशुभ मानिन्छ । जहिले पनि बाहिर बाट आइसकेपछि बाहिर खुट्टा सफा गरेर मात्र घर भित्र प्रवेश गर्नु पर्छ ।
वास्तु टिप्स : घरमा सुख-समृद्धि ल्याउन विहानै गरौं यी काम वास्तु शास्त्र आफैमा एक विज्ञान हो । हुन त वास्तुको, आध्यत्मको कुरा गर्दा आधुनिक पुस्ताले यसलाई सोझै अस्विकार गर्छ । उनीहरुलाई लाग्छ, यी आडम्बर कुरा हुन् । पुरातन सोंच हुन् ।
तर, यसभित्र पनि विज्ञान हुन्छ । वास्तु शास्त्रले निर्देशित गर्ने कुरा व्यार्थ हुँदैनन् । यद्यपी उक्त निर्देशनको आशय के हो र त्यसको प्रभाव के रहन्छ भन्ने कुरा केलाउन सक्नुपर्छ । वा बुझ्न सक्नुपर्छ । हामीकहाँ बिहान उठ्नसाथ पूजापाठ गर्ने चलन छ । तुलसीको मठमा पानी चढाउने । शंख-घण्टी बजाउने । मन्त्रोच्चारण गर्ने । भगवानको नाम जप्ने ।
यी तमाम कर्मले हाम्रो मनको शुद्धिकरण गर्छ । सकारात्मक भाव पैदा गर्छ । मन शान्त, खुसी र सकारात्मक हुन्छ । यी कर्म गरिरहँदा हामी बिनयी, बिनम्र हुन्छौं । फलतः दिनभर यसको सकारात्मक भाव हामीभित्र रहिरहन्छ ।
प्रकाशित मिति २० कार्तिक २०७६, बुधबार १४:२७